သူကြီးခင်ဗျား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Letter to The Editor » သူကြီးခင်ဗျား
Posted by Sky ko ko on Nov 24, 2011 in Letter to The Editor | 36 comments
ဆိုသော အကြောင်းအရာအား… ဘာကြောင့်ခေါ်စေချင်စေသလဲဆိုသည့် အကြောင်းပြချက်လေး ထည့်ပေးပြီးလုပ်ထားရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်မိပါတယ်…. တစ်ဦးချင်းရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေ ကျုပ်တို့ ရွာသူ/ရွာသားအားလုံး အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးလို့ရစေမယ်လို့ ယုံမိပါကြောင်း….
ကျုပ်အခုလို ပြောလို့ သူကြီးက ရွာနှင်ဒဏ်ပေးမှာတော့ ကြောက်မိကြောင်းပါ……
Burma ဆိုတဲ့ သဘောကတော့ … ဘာ မှ …ဘာမှ မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ သဘောမို့ နမိတ်မကောင်းဘူးထင်ပါရဲ့ ..
Myanmar ဆိုတာတော့ … မြန်မြန်မာလာအောင်ပါ … (ငွေရေးကြေးရေး ၊ စီးပွားရေးတွေ မာလာတာကိုပြောတာ ) …
အကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူး …လျှောက်ရွှီးတာ .. ဟီးဟီး
အသံထွက် အမှန်ဖြစ်တဲ့ Myanmar လို့ ခေါ်စေချင်မိပါတယ်။
သို့သော် သည်အသံကို နိုင်ငံခြားသားတွေ(အထူးသဖြင့် အဖြူတွေ) ဖတ်ရင် အသံထွက် သိပ် တိကျလွန်းနေတော့
Myan+mar(မြအန်းမာ) ဖြစ်ဖြစ်နေတာ နားထောင်ရအတော်ဆိုးပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသား ကိုယ့်ကို အသံထွက်မှန်စေဖို့ စာလုံးပေါင်းကို Myammar လို့ ပြောင်းပေးဖို့ကလည်း
ဒုတိယအချက် ကတော့ အရင်ကလည်း မန့်ဖူးပါတယ် နိုင်ငံက Myanmar ဆိုရင် လူမျိုး ဘာသာ စတာတွေအတွက်
Adjective မရှိပါဘူး(Myanmarian တို့ Myanmaria တို့ပေါ့) …
Burma ကျပြန်တော့ သည်အချက်ကလေး က လာပြေလည်နေတာ တွေ့ရပါတယ်(Burmese, Burman)
စတဲ့ Adj: တွေရှိနေလို့ပါ။ နောက်တချက် သူက ဖတ်ရတာ အသံမာကျောမှု ဂုဏ်သတ္တိရှိပါတယ်
ဌာန်နဲ့ မာန်နဲ့ ရွက်ဆိုလို့ကောင်းပါတယ်
သူ့ရဲ့ မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ သိတော်မူကြတဲ့အတိုင်း
နိုင်ငံ့ နာမည်ကို အိန္ဒိယ နွယ်ဖွားတွေ မျက်နှာဖြူတွေကို အသံထွက်ပြခဲ့တဲ့ အသံဖြစ်နေတာပါပဲ
သည်တော့ သဂျိုင်ခီး ရဲ့ ဗုတ် ကို ဘယ်တခုမှ မရွေးဘဲ …Noပဲဗုတ် သွားပါတယ်…
အိုခေ….သည်တော့ ကျနော်နဲ့ သဘောတူညီတဲ့ ရွာသားများလည်း….
No လေး Vote ပါဟေ့ …No လေး Vote ပါဟေ့ …No လေး Vote ပါဟေ့ …
(ဆိုင်း၂ဂွမ်းလိုင် သီချင်းအလိုက်ဖြင့် ဆိုပါ)
ဂီဂီ ပြောသလိုဆို Burma က Buddhism တို့ Buddhist တို့နဲ့ပါ နီးစပ်မယ်ထင်တယ်။ (အထင်နှင့် ၀င်ဖောခြင်းဖြစ်သည်။)
ဈေသုံးလဲမကြွယ်နဲ့ ရှေးထုံးလဲမပယ်နဲ့ တဲ့..
ဖြစ်သင့် မဖြစ်သင့်ကိုယ့်ဘာသာတွေးပြီး ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲတာကောင်းမယ်….
ကျုပ်အဲလိုပြောလို့… ကျုပ်က ဗိုလ်ချုပ်ကို မချစ်လို့/မလေးစားလို့တော့မဟုတ်ပါ…
ကျုပ် ဝင်းတော်ကာ အား
ရွာထဲမှ လူများသည် မောင်ပေ ဟု ခေါ်ကြသည် ။
ကိုပေါက် က ဝါတော်ကင်း ဟု ခေါ်သည် ။
ကမ်းကြီး က ရဲဘော် ဟု ခေါ်သည် ။
ပေါက်ဖော် က ကပေ ဟု ခေါ် လေသတည်း ။
“ တွံ ဂဏာဟိ ”
မှတ်ချက်။ ။ အောက်ပါအကြောင်းကို သဂျီးလေသံဖြင့်ဖတ်ပါ
တိုင်းပြည်နာမည်ပြောင်းတာ မှင်ကုန်တယ် စာရွက်ကုန်တယ်
စာရင်းဇယားတွေပြင်ရမယ် ကျောင်းတွေရုံးတွေမှာသုံးနေတဲ့ စာအုပ်တွေပြင်ရမယ်
မှန်ပါ၏ ..၊ သို့သော် ဆြာပု မတက်ပါနဲ့…၊
ဆြာပု လူဂျီးဖြစ်ရင် အနော်တို့ ဆဲနည်းကား သင်ရိုးညွှန်းတန်း ကျက်နေရမှာမို့..
ခရိုအေးရှား၊ ဂရိ တို့ နဲ့ သင်္ဘောလိုက်တုန်းက ကျွန်တော့်ကိုမေးတယ် .. ဘယ်နိုင်ငံကလဲတဲ့။ ကျွန်တော်က ဖြေတယ် မြန်မာနိုင်ငံကပါလို့ ။ သူတို့ ကအူလည်လည်နဲ့ သိဘူးတဲ့။ မသိဘူးဆိုတော့ ကျွန်တော်က ဗားမား လို့ ထပ်ပြောတယ်။ အဲဒါလည်းသိဘူးတဲ့။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ပတ်ပတ်လည်က အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ အမည်တွေရွတ်ရတယ်။ အဲဒါမှ မောင်မင်းကြီးသားတို့အသံထွက်လိုက်ပုံက ဘူးမား လားတဲ့။ ဗားမားဆိုလည်းမရဘူး။ ဘူးမားကြီးပဲ ပြောတော့ ကျွန်တော်လည်း ထားလိုက်တော့တယ်။
Burma ဆိုရင် သိပ်တော့ မကောင်းဘူးလို့ထင်တာပဲ
ဗမာ လူမျိုးဆိုတာရှိတယ်လေ ဗမာလူမျိုးတွေနဲ့ပဲ ဒီနိုင်ငံက တည်ထောင်ထားတာ မဟုတ်ပြန်တော့
ကျွန်တော်ကတော့ Myanmar ဆိုတာပဲ ကောင်းတယ်ထင်တာပဲ …
ရမ်းတုတ်ပြီး ပွိုင့်ယူသွားကြောင်းပါ …
ကျွန်ုပ် ကောင်းကင်ကိုကိုလည်း Burma ထက် Myanmar ကို ပိုနှစ်သက်မိကြောင်းပါ…
မြန်မာကြီးပြောင်းလဲစေ ဆိုတော့ …………………….
ပြည် တစ်လုံး ကျန်သွားလို့ဗျို့ …
ဖတ်တော့ အသံရေးတော့ အမှန်တယ်။
မင်းဘာလူမျိုးလဲမေးရင် ဗမာလူမျိုးလို့ အားရပါးရဖြေလိုက်မှာပေါ့။
ဘယ်မြို့မှာနေလဲ မေးရင် မန်းလေးမှာနေတာလို့ပြောမှာပေါ့
စာနဲ့ရေးပြဆိုရင် မန္တလေးက လို့ရေးပြမှာပေါ့။
အဲတော့ မြန်မာခေါ်ခေါ် ဗမာခေါ်ခေါ်
ကိုယ်တိုင်က လူမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်ဘို့ရယ်ကိုယ့်လူမျိုးကို ကိုယ်တကယ်ချစ်ဘို့က အဓိကပါဗျာ။
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ အတွက်ကောင်းအောင်လုပ်ဖို.က အဓိကပါ
နာမည်ဆိုတာက သိပ်တော့ အရေးမပါ ပါဘူး
မှန်ပါတယ် ကိုပေါက်ပြောသလိုပေါ့… ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်ချစ်ဖို့က ပိုအဓိကကျပါတယ်
စိတ်ဓါတ်.. စိတ်ဓါတ်… စိတ်ဓါတ်…………………………………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Burma လို့ ခေါ်လဲဘာမှမဖြစ်သွားဘူး။Myanmar ခေါ်လဲထူးမလာပါဘူး။
တစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကို ရိုက်ချိုးပစ်ခဲ့ပြီးပြီ။တိုင်းရင်းသား
စိတ်ဓာတ်ပိုင်းမှသည် ချွတ်ခြံကျနေသော ဘက်စုံပြုပြင်ရေးဆီသို့ သာဦးတည်သင့်။
တကယ်တော့.. အမည်နာမဆိုတာ.. အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်..။
အင်မတန်မှ… တကယ့်အင်မတန် အရေးကြီးပါတယ်… တန်ဖိုးလည်း ကြီးတယ်…။
အမည်တခုကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့.. အသက်တွေရင်းရတယ်..။ ဘ၀တွေရင်းရတယ်..။
အခုမြန်မာပြည် အမည်ပြောင်းခဲ့တဲ့ ကိစ္စကလည်း… ဒေါ်လာနဲ့တွက်ရင်.. မီလီယန်ပေါင်းများစွာကုန်ခဲ့တာပေါ့..။
ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်.. ပြန်ရိုက်ရတဲ့..ငွေစက္ကူတွေ.. အစိုးရရုံးသုံးစာရွက်တွေ…။
နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်… ကုလသမဂ္ဂနဲ့..တခြားနိုင်ငံအစိုးရရုံးသုံးစာရွက်တွေ.. ကျောင်း..တက္ကသိုလ် သင်ရိုးညွှန်းတန်းတွေ.. အကုန်ပြင်ရတာပေါ့..။
ကုန်ကျငွေဘယ်လောက်ရှိမလည်း.. မှန်းကြည့်ဖို့တောင် ခက်မယ်..။
အခု.. ယူအက်စ်က.. အစိုးရရုံးတွေမှာ.. အဲဒီမြန်မာပြည်ရဲ့.. အမည်ကို ပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုနေချိန်လို့…ယူဆမိတာပါ..။
ဒါကြောင့်.. မြန်မာတဦးအနေနဲ့… ဘယ်လိုခေါ်စေချင်သလည်း.. ဗုဒ်တင်လိုက်တာပါ..။
ဒီမက်ဆေ့ခ်ျကို.. ယူအက်စ်အော့ဖ်ရှယ်တွေ.. သတိထားပါလိမ့်မယ်..။
I want let to call Myanmar country. Because myanmar is including all races and bamar. Actually, I m bamar so…burma is no problem for me. But i think burma is represent for the bama and myanmar is represent for all races. This name is equal for all . This is my thinking.
That right, i also think.
ပထမ Burma လို့ ခေါ်တယ်။ ကမ္ဘာ က ဘယ်လောက် သိခဲ့ လဲ။ Burma လို့ မပြောဘဲ ဦးသန့် တိုင်းပြည် က လို့ ပြောရင် လူ ပို သိတဲ့ ခောတ် ရှိခဲ့ ဘူးတယ် ။ အိမ်နား ကပ်နေတဲ့ ထိုင်းကတောင်မှ Burma လို့ ပြောရင်သာမာန် လူတန်းစား က မသိပါဘူး ၊ Myanmar လို့ ပြောလည်းမသိဘဲ သူတို့ အသံထွက်နဲ့ ဖမားးးးး လို့ ပြောမှ သိတယ် ။ ဂျပန်တွေ က ဘိရုမာ ၊ အပေါ်မှာ ဆရာတစ်ယောက်ပြောသလို ဘူးမားဆိုပြီး ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံ ကကောင်တွေလည်းရှိတယ် ။
ပညာတတ် အသိုင်းအ၀ိုင်းကတော့ တစ်မျိုးပေါ့။
အခု ခေါ်တဲ့ Myanmar ဆို လည်းထိုနည်း ၄င်းဘဲ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံသားလို့ပြောရင် ပိုသိကြတယ် ။ကမ္ဘာ့ ဘယ်နားရှိလည်းဆိုတာ သိတဲ့ သူ က ပိုတောင်ဝေးသေးတယ် ။
Burma ဘဲ ပြောပြော Myanmar ဘဲ ပြောပြော နိုင်ငံခြားသားအတွေ အတွက်က သိပ်မထူးပါဘူး ။ သိမှ မသိကြတာ ။ ဒါမှ မဟုတ် သူတို့ အခေါ် အဝေါ် နဲ့ သူတို့ခေါ်ကြတာ။
Burma လို့ဘဲ ခေါ်စေချင်တဲ့ အများစုက စစ်အစိုးရ က သူ့ သဘောနဲ့ သူ ပြောင်းလဲလို့ ဆို တဲ့ အချက်ကို ကိုင်ပြီး Myanmar လို့ မခေါ်ချင်ကြတာဘဲ။ တစ်ခြား အကြောင်းပြချက် မရှိဘူးလို့ ထင်တာဘဲ။ အခြားအကြောင်းများရှိလျှင်ပြောပြ ပေးကြပါ။
Myanmar လို့ ခေါ်စေချင်တဲ့ အများစု ကတော့ အားလုံး ကိုယ်စားပြု အောင် ၊ ဗမာ တစ်မျိုးထည်းက လက်ဝါးကြီးအုပ်တာ မဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိကြတယ် ။
နံမည် ပြန်ပြောင်းရင် အကုန်အကျလည်း များဦးမယ်။
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် လို့ မြန်မာလိုပြောတဲ့ ထဲက Myanmar သာကျွန်တော် ရွေးတယ်။
ဟုတ်တယ်ဗျ။ ဗားမားနဲ့မြန်မာကို မသိပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆို နိုင်ငံတိုင်းလိုလို သိကြတယ်ဗျ။ တရုတ်တွေလည်း မြန်မာကို မြန်မာလို့ မခေါ်ကြဘူး။ မြန်တျန်းလို့ခေါ်ကြတယ်။ ကြည့်ရတာ ချိုင်းနားကို တရုတ်လို့ ခေါ်သလို မြန်မာကို မြန်တျန်းလို့ခေါ်တယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း တရုတ်မဟုတ်တော့ ဘာအဓိပ္ပာယ်လည်း မသိဘူး။
ခြောက်တန်းတုန်းက ဆရာမတစ်ယောက်ပြောဖူးတာက ..
ုမြန်မာဆိုတာ.. ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်တဲ့.. (၁၃၅ မျိုးဆိုလား)
ဗမာဆိုတာကျတော့ .. ဗမာ(လူမျိုး) တစ်ခုထဲတဲ့ ..
“ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်” နဲ့ “ပြည်ထောင်စုဗမာနိုင်ငံတော်”
ဘယ်ဟာက အဆင်ပြေမလဲ အဲဒါလေးစဉ်းစားသင့်တယ်ထင်တယ်
ကျုပ်က တော့ “ မြန်မာ”ကိုပိုကြိုက်
ဆိုင်တော့ မဆိုင်ဘူး ..
ဒါပေမယ့် မမန့်မဖြစ်လို့ မန့်လိုက်ပြီ
အိုင်ပီ ကိစ္စ ….ရန်ကုန်က ကိုရင်စည် လှမ်းချက်တဲ့စာသားလေးပါခင်ဗျား…
သည်နှစ်ရက်အတွင်း ဂေဇက်မှ မည်သို့ လုပ်လိုက်သည်မသိ ကိုရင်တို့ ရွာထဲက ဘယ်လိုမှ ၀င်လို့မရကြောင်း၊ ဖောက်ဝင်တော့လည်း လော့အင်ကို ဘယ်လိုမှ ၀င်မရဖြစ်နေဒယ်.. သဂျီးရေ… အဲ့တော့ ဒီလိုပဲ အိုင်ပီတွေကို ဆက်ဘန်းထားဦး မှာလား.. ပြန်ဖွင့်ပေးမယ့် အစီအစဉ် ရှိမရှိ၊ ရှိပါက ဖြေကြားပေးပါဗျာ။ ရတော့ဘူးဆိုလည်း စာဖတ်သူဘ၀နဲ့ပဲ အားပေးပါတော့မယ်ဗျာ….. :neutral: :neutral:
မှော်ဆြာ ပြောသလို အနှီသံတွဲသားတွေကို
စနိုက်ပါနဲ့ပဲ ထုပါသဂျီးရေ့ ..
ဗုံးကျဲတဲ့အခါ မလိုလားအပ်တာတွေပါ ထိကုန်ကြောင်းပါ…
တိုင်းရင်းသားအများစု နေထိုင်သော တိုင်းပြည်ကိုယ်စားပြုအဖြစ် မြန်မာဟု ခေါ်စေချင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဗမာလူမျိုး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ချင်းလူမျိုး………………..စသည်ဖြင့်၊
မောင်သက်ရှည်လို့ ခေါ်ပြီး ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ သေတတ်သေးတယ်
မောင်ချမ်းသာက လမ်ေးဘးက သတောင်းစား ဖြစ်နေတတ်တယ်
မောင်ဘ ဆိုပြီး သူဌေးကြီးလဲ ဖြစ်နေတတ်တယ်
တော်တော်ကြာ ဦးရွှေလေး ဆိုတာကို မကြိုက်လို့ နာမည် ပြင်မယ် ဆိုတော့
သုဝဏ္ဏဓနုံ ဆိုပြီး ပြောင်းပေးလိုက်တော့ နောက်ဆုံး ရွှေလေးပဲပေါ့
အထက်မှာ ဆွေးနွေးကြသလို တခြား တိုင်းပြည်က သူတို့ အသံထွက်တွေနဲ့ ခေါ်နေကြတာပဲ
အခုထိ ကမ္ဘာ့မြေပုံမှာ Myanmar လို့ ရေးထားပြီးပြီပဲ ထပ်ပြင်မယ် ဆိုရင် စရိတ်တွေ ကုန်ပါတယ်
ဘားမားလို. မခေါ်စေချင်ဘူး ဗျာ အဲ.လိုခေါ်ရင်တစ်ချို.တွေက ဗမာကိုပဲပြေးပြေး မြင်ကြပါတယ် ကျွန်တော်လဲဗမာ တစ်ယောက်ပါ ဒါပေ.မယ်.လဲ မြန်မာနိုင်.ငံဆိုတာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါ်င်းစုံနေထိုင်တဲ.အတွက် မြန်မာဟုသာခေါ်စေချင်ပါတယ် (ကမ္ဘာမကြေ မြန်မာပြည်. တို.အဘိုးအဖွားအမွေအနှစ်မို.ချစ်မြတ်နိုးပေ ) ရေးရင်းနဲ.မျက်ရည်ဝဲတယ်ဗျာ
Burma က ဗမာလူမျိုးတွေနဲ့ပဲဆိုင်မယ်ထင်တယ် Myanmar ကတော့ တိုင်းရင်းသား အားလုံးနဲ့ ဆိုင်တယ်.. အဲဒါကြောင့် Myanmar လို့ခေါ်တာ ပိုကောင်းတယ်….
Myanmar ပါဗျာ Myanmar ပါ………………